Degso Driving Academy Simulator 3D APK loogu talagalay Android
Degso Driving Academy Simulator 3D
Degso Driving Academy Simulator 3D,
Darawalnimada Simulator -ka 3D waa ciyaar aan laga maarmi karin kuwa doonaya inay bartaan wadista baabuurka. Waad ku mahadsan tahay Simulator Academy Driving 3D, oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto mashiinka Android, waxaad baran kartaa sida baabuurka loogu kaxeeyo magaalada iyo taraafikada culus.
Qof walba wuxuu rabaa inuu kaxeeyo, laakiin wadista marna ma sahlana. Marka laga reebo aqoontaada farsamo, waxa kale oo lagama maarmaan ah inaad degganaato markaad baabuurka waddo. Sababtoo ah daqiiqad kasta oo argagax ah, waxaad samayn kartaa khaladaad waaweyn xiisahaaga awgeed. Si aad uga fogaato xaaladdan, naftaada naso oo si deggan u bilaw inaad ku ciyaarto Simulator Academy Simulator 3D.
Iyada oo leh gawaarideeda kala duwan iyo garaafyada cajiibka ah, Driving Academy Simulator 3D ayaa ku baraya sida loo wado si fudud. Isagoo u sharxaya dhammaan xeerarka ardaydooda mid mid, Driving Academy Simulator 3D wuxuu bilaabayaa wadista imtixaanka kadib markuu dhammeeyo xeerarka. Marka imtixaanka la qaadayo, waxaa lagu cabiraa inaad raacdo xeerarka iyo in kale. Markaa waa inaad ku dhaqantaa oo qaadataa xeerarka oo dhan.
In Simulator Academy Driving 3D, waxaad ku maareeysaa gaariga shaashadda. Gaaska iyo bareegaha ayaa ku yaal shaashadda midigta, isteerinkana bidixda. Waad ku mahadsan tahay kontarooladan, waxaad si fudud u maareyn kartaa gaariga xitaa marka ay jiraan taraafikada culus. Iyada oo leh hawlgallo adag iyo xaglo kaamerooyin kala duwan, Driving Academy Simulator 3D waxay u timaadaa badbaadinta kuwa doonaya inay ciyaaraan baabuurta. Soo dejiso Simulator Academy Driving 3D hadda oo noqo darawal tababaran.
Driving Academy Simulator 3D Noocyada